पोर्चुगिज - विवाह
पोर्चुगिज — विवाह
धेरै बालिका मा सोभियत संघ को सपना विवाह रही विदेश । यो एक जस्तै जीवन मा एक परी कथा, एउटा सेतो घोडा मा राजकुमार, एक विला समुद्र द्वारा छ र कुनै चिन्ता. हाम्रो गुलाब»रंग चश्मा»लागि एक दोस्रो र अवस्था मूल्याङकन गर्नु एक सचेत हेर्नुहोस् संघ को. खराब मान्छे, कुनै राम्रो संयुक्त राष्ट्र, बस मान्छे ।, बारेमा कुरा गर्न राम्रो पोर्चुगिज वा खराब मान्छे । कुरा गरौं मा फरक. जब म थियो एक व्यक्तिगत सम्बन्ध संग पोर्चुगिज, यो थियो छैन न्याय द्वारा या त साथी वा बस द्वारा निगरानी. यहाँ, बस केही वर्ष पहिले, महिला लगाएका ब्यालेट स्कर्ट, कुनै रहनसहन, र कुनै एडी । त्यसपछि प्रवास को, यूक्रेनियन, र ब्रस पोर्चुगल गर्न थाले । र, को पाठ्यक्रम, यो संस्कृति गर्न थाले मिश्रण । जवान मानिसहरू जो पहिले देखि नै एक अधिक खुला मन एक मन संग एक इच्छा सिक्न र. हामी कुरा गर्दै छन् पुरुष र महिला । बस सही उमेर एक परिवार सुरु गर्न. के छ देखि एक मानिस, एक महिला र जो गर्न तयार छ केहि दिन मा फिर्ती? यो लागि राम्रो छ पोर्चुगिज सफा गर्न शनिबार.
र कुनै. सबै को शनिबार छ हाम्रो टाउको मा, छैन अब, यो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. वास्तवमा, तपाईं गर्न सक्छन् अर्पण एक सम्पूर्ण दिन पहिले पनि केही धार्मिक चाडपर्वका र हरेक शनिवार । अनि पुरुष, को पाठ्यक्रम, भनेर बुझ्न शनिवार मित्र जान गर्न पट्टी, र महिला»सफा घर». र, को पाठ्यक्रम, तपाईं सिक्न आवश्यक कुक गर्न कसरी पोर्चुगिज भाँडा, तपाईं चाहनुहुन्छ भने विवाहित पोर्चुगिज पुरुष, को संभावना तिनीहरूलाई लिङ्कमा सूप वा पकौडी गर्छन शून्य छ । गाउँ मा, तपाईं अझै पनि देख्न वृद्ध महिला संग एक ग्याँस सिलिन्डर मा आफ्नो टाउको वा एक टोकरी आलु । मानिसहरू साँच्चै छक्क महिला द्वारा गर्न सक्षम हुने छैन, घर ल्याउन बीस किलोग्राम खाना । एक सामान्य पोर्चुगिज सम्बन्ध अघि विवाह पछिल्लो गर्न सक्छन् वर्ष को लागि र अब. अवस्थामा छन्, र एकदम अक्सर, एक मानिस मा आफ्नो जीवन संग आफ्नो आमाबाबु र»पूरा»आफ्नो»प्रेमिका»को आफ्नो उमेर मा सप्ताह. यो साँचो हो कि हाम्रो महिलाहरु चाँडै शुरू गर्न विभाग को रेकर्ड को कार्यहरू को नागरिक स्थिति छ । पोर्चुगिज धेरै राम्रो छ, तर एउटा कुरा मलाई के थाहा छ कि पोर्चुगिज थियो जो संग एक सम्बन्ध हाम्रो पत्नी कुनै पनि अधिक संग सम्बन्ध पोर्चुगिज. तिनीहरूले अक्सर विवाह किनभने, राम्रो तिर्न, आवास ऋण सँगै । र त्यसपछि सबैले जीवन आफ्नै जीवन छ । हाम्रा पत्नीहरू कुनै अपवाद छन् । भने सबैलाई दिन्छिन्, आफूलाई लागि वा आफ्नो बारी गर्न को लागि तिर्न दुई । निस्सन्देह, अपवाद छन् । तर सिद्धान्त मा, यो सामान्य छ लागि तिनीहरूलाई छ । र फेरि: तिनीहरूले गर्न सक्छन्, क्रम मा एक डबल टुकडा केक छ, यो लोभ छैन, यो सबै को लागि सामान्य. त्यहाँ पनि केही व्याख्या गर्न । तर तपाईं कुरा गर्न सक्छौं, र बारेमा लेख्न प्रेम. हेर्न र आँखा । अक्सर तपाईं देख्न, यो जोडी छ, जवान र राम्रो छ, र त्यो छ वृद्ध, बारे तीस किलो, र तपाईं देख्न मा उनको एक देवी छ । उहाँले आयोजित उनको हात.
विज्ञप्ति कि डर तिनीहरूले दूर लिन
अर्को सकारात्मक कुरा भइरहेको विवाह संग एक पोर्चुगिज निवास परमिट र पोर्चुगिज नागरिकता. यदि आवास को लागत साधारण मान्छे को लागि बारेमा छ यूरो, त्यसपछि लागत विवाह (दुवै लागि एक पत्नी, एक इटालियन र पोर्चुगिज पति) यो केवल. र केही वर्ष पछि विवाह, विदेशी पति हकदार प्राप्त गर्न पोर्चुगिज नागरिकता. यो कुरा छैन भने तिनीहरूले एक काम वा छैन कि, तिनीहरूले थाह पोर्चुगिज र इतिहास (नागरिकता प्राप्त गर्न सामान्य तरिका र आवश्यक सर्त रूपमा).
त्यहाँ पनि एक को»राष्ट्रिय उत्पादन»
यी हाम्रो प्राप्त गरेका छन् पोर्चुगिज नागरिकता. लागि रूपमा कागजातहरू, तिनीहरू सबै नै अधिकार छ रूपमा देशी पोर्चुगिज (सहित विवाह). लागि रूपमा, तिनीहरूले देखि अलि फरक छन् गर्नेहरूलाई घरमा बसे. तर म भने, यो सबै निर्भर प्रत्येक व्यक्ति । जो कसैले यहाँ बस्ने छ र आकर्षित देखि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो संस्कृति, र जो, अर्कोतर्फ, बिहे गर्ने एक महिला विवाह छैन. पोर्चुगिज मा पोर्चुगल वा घर मा । म लेख्न चाहँदैनन् लागि एक क्रम मा विवाह मेरो मातृभूमि, म लेख्न के तपाईं यहाँ आवश्यकता रूपमा, एक विदेशी दुलहीको: एक पासपोर्ट, एक निवास परमिट, यो एक कागजात छ भनेर पुष्टि गर्छ कि तपाईं थिएनन् विवाह मा आफ्नो मातृभूमि, र छैन को कारण रोक्न भनेर विवाह (मा जारी आफ्नो दूतावास). भने, उदाहरणका लागि, तपाईं एक पर्यटक वीसा, आवास आवश्यक छैन । त्यहाँ छ भने कुनै भिसा वा निवास परमिट (नागरिक रजस्ट्री कार्यालय), हामी तपाईं सुझाव पेश एक आवेदन छ (सेवा, संग काम विदेशी आप्रवासी) बारे के स्थिति मा हो, देश र त्यसपछि तपाईं प्रतीक्षा गर्नुपर्छ लागि जवाफ. एक महिना वा बढी, र त्यसपछि शायद तपाईं. यहाँ मानव कारक अक्सर काम पोर्चुगल मा अक्सर छ बस रूपमा खुसी छ । भन्ने तथ्यलाई बावजुद एक व्यक्ति आउँछ, कसैले हुन्छ आफ्नो बाटो मा, र कसैले बनाउँछ र मदत गर्न खोज्छ. विवाह दिनहरु मा र मा काम घन्टा समयमा रजस्ट्री कार्यालय लागत यूरो. सप्ताहन्तमा: यूरो समारोह । जो कसैले अनुभव छ संग काम पोर्चुगिज विपरीत सेक्स, तपाईं निम्तो यो विषय छलफल गर्न मंच मा
← जहाँ मान्छे गलत जान तिनीहरूले पूरा गर्दा, एक केटी तिनीहरूले साँच्चै जस्तै
अनियमित डेटिङ भिडियो च्याट →